VDay မှာထွက်ရှိမယ့် “ကတိ” တေးစီရီးနဲ့ ပရိသတ်တွေကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ ချစ်သုဝေ – The Padaythar
ချစ်စရာကောင်းပြီး ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ချပြပေးနေခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် မင်းသမီးချောလေး ချစ်သုဝေ ဟာဆိုရင် အဘက်ဘက်ကနေ တော်လွန်းထက်မြက်လွန်းတဲ့ သူလေးတစ်ယောက်ပါ။ အရာရာမှာ ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိလွန်းလှတဲ့ သူမကတော့ ယခုဆိုရင် ဒုတိယမြောက် တေးစီးရီးဖြစ်တဲ့ “ကတိ” တေးစီရီးကို ပရိသတ်တွေနဲ့ စတင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တေးသံရှင် ချစ်သုဝေ ရဲ့ “ကတိ” Promis Audio Album စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲကို ယနေ့ နေ့ခင်း ၂နာရီ က ရန်ကုန်မြို့ Myanmar Plaza ရှိ Hard Rock Cafe မှာ ကျင်းပခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သုဝေရဲ့ တေးစီးရီးမိတ်ဆက်ပွဲကို အနုပညာရှင်များစွာတို့က တက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ဒီတေးစီးရီး လေးဟာ ချစ်သုဝေရဲ့ ဒုတိယမြောက်ထွက်ရှိတဲ့ တစ်ကိုယ်တော် အယ်လ်ဘန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်ယူပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ထားခဲ့တဲ့ ချစ်သုဝေရဲ့ “ကတိ” အယ်ဘမ်ကတော့ ပထမထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ အယ်ဘမ်နဲ့ ရှစ်နှစ်ကြာအောင် ကွာဟခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၈နှစ်တာကြာမှ ဒုတိယအယ်ဘမ်ကို ထွက်ရှိထားခဲ့ရတဲ့ ချစ်သုဝေရဲ့ တေးစီးရီးမိတ်ဆက်ပွဲမှ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ VDay အမှီ ပရိသတ်တွေကို ချပြပေးသွားတော့မယ့် “ကတိ” တေးစီးရီးမိတ်ဆက်ပွဲမှ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဆက်လက်ပြီး ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်။
“ကတိ” Promis Audio Album ကို FG Entertainment က ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီး Bo Bo Music Production က လာမည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ရက် မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ဖြန့်ချိသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “ကတိ” Promise Audio Album ကို အခက်အခဲတွေ မိသားစုအချိန်ပေးရမှုတွေကြားက ကြိူးစားပြီး ထွက်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် ချစ်သုဝေ က အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ထပ်မံဖြေဆိုထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေမေချစ်သုဝေရဲ့ “ကတိ” တေးစီးရီး မိတ်ဆက်ပွဲမှာ အရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းပြီး ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ ခေတ်နဲ့ သစ်တို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်စရာမြင်ကွင်းပုံရိပ်အလှ
ချစ်သုဝေရဲ့ ဒုတိယတေးစီးရီးဖြစ်တဲ့ “ကတိ” တေးစီးရီးမိတ်ဆက်ပွဲမှ ကြည်နူးစရာ မြင်ကွင်းပုံရိပ်လေးတွေကို သဘောကျ ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် ဒီပို့စ်လေးကို Share ပြီး အားပေးသွားကြပါဦးနော်။ VDay မှာ ဖြန့်ချီပေးပြီး ပရိသတ်တွေလက်ထဲကို မကြာခင်အချိန်မှာ ရောက်ရှိလာတော့မယ့် ချစ်သုဝေရဲ့ “ကတိ” အယ်ဘမ်လေးကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှု အားပေးကြပါဦးနော်။ ကြည့်ရှုအားပေးကြပါသော ချစ်ပရိသတ်များအပေါင်းကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။။
ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး ပီျပင္တဲ့ သရုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ခ်ျပေပးေနခဲ့တဲ့ သရုပ္ေဆာင္ အဆုိေတာ္ မင္းသမီးေခ်ာေလး ခ်စ္သုေဝ ဟာဆုိရင္ အဘက္ဘက္ကေန ေတာ္လြန္းထက္ျမက္လြန္းတဲ့ သူေလးတစ္ေယာက္ပါ။ အရာရာမွာ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ရွိလြန္းလွတဲ့ သူမကေတာ့ ယခုဆုိရင္ ဒုတိယေျမာက္ ေတးစီးရီးျဖစ္တဲ့ “ကတိ” ေတးစီရီးကို ပရိသတ္ေတြနဲ႔ စတင္မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေတးသံ႐ွင္ ခ်စ္သုေဝ ရဲ့ “ကတိ” Promis Audio Album စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲကို ယေန႔ ေန႔ခင္း ၂နာရီ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Myanmar Plaza ႐ွိ Hard Rock Cafe မွာ က်င္းပခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္သုေဝရဲ့ ေတးစီးရီးမိတ္ဆက္ပဲြကို အႏုပညာ႐ွင္မ်ားစြာတို႔က တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး ဒီေတးစီးရီး ေလးဟာ ခ်စ္သုေဝရဲ႕ ဒုတိယေျမာက္ထြက္႐ွိတဲ့ တစ္ကုိယ္ေတာ္ အယ္လ္ဘန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အခ်ိန္ယူၿပီး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားခဲ့တဲ့ ခ်စ္သုေဝရဲ႕ “ကတိ” အယ္ဘမ္ကေတာ့ ပထမထြက္ရွိထားခဲ့တဲ့ အယ္ဘမ္နဲ႔ ႐ွစ္ႏွစ္ၾကာေအာင္ ကြာဟခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၈ႏွစ္တာၾကာမွ ဒုတိယအယ္ဘမ္ကို ထြက္ရွိထားခဲ့ရတဲ့ ခ်စ္သုေဝရဲ႕ ေတးစီးရီးမိတ္ဆက္ပြဲမွ ပံုရိပ္ေလးေတြကို ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ျပန္လည္မွ်ေဝ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ VDay အမွီ ပရိသတ္ေတြကို ခ်ျပေပးသြားေတာ့မယ့္ “ကတိ” ေတးစီးရီးမိတ္ဆက္ပြဲမွ ပံုရိပ္ေလးေတြကို ဆက္လက္ၿပီး ၾကည့္ရွဳအားေပးၾကပါဦးေနာ္။
“ကတိ” Promis Audio Album ကို FG Entertainment က ထုတ္လုပ္တာျဖစ္ၿပီး Bo Bo Music Production က လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ရက္ မွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို ျဖန္႔ခ်ိသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ “ကတိ” Promise Audio Album ကို အခက္အခဲေတြ မိသားစုအခ်ိန္ေပးရမႈေတြၾကားက ႀကိဴးစားၿပီး ထြက္ခဲ့ရတာျဖစ္တယ္လို႔ အဆိုေတာ္၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခ်စ္သုေဝ က အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ ထပ္မံေျဖဆိုထားခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမေမခ်စ္သုေဝရဲ႕ “ကတိ” ေတးစီးရီး မိတ္ဆက္ပြဲမွာ အရမ္းကိုခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကတဲ့ ေခတ္နဲ႔ သစ္တို႔ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ခ်စ္စရာျမင္ကြင္းပံုရိပ္အလွ
ခ်စ္သုေဝရဲ႕ ဒုတိယေတးစီးရီးျဖစ္တဲ့ “ကတိ” ေတးစီးရီးမိတ္ဆက္ပြဲမွ ၾကည္နူးစရာ ျမင္ကြင္းပံုရိပ္ေလးေတြကို သေဘာက် ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တယ္ဆိုရင္ ဒီပို႔စ္ေလးကို Share ၿပီး အားေပးသြားၾကပါဦးေနာ္။ VDay မွာ ျဖန္႔ခ်ီေပးၿပီး ပရိသတ္ေတြလက္ထဲကို မၾကာခင္အခ်ိန္မွာ ေရာက္ရွိလာေတာ့မယ့္ ခ်စ္သုေဝရဲ႕ “ကတိ” အယ္ဘမ္ေလးကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္ရွဳ အားေပးၾကပါဦးေနာ္။ ၾကည့္ရွဳအားေပးၾကပါေသာ ခ်စ္ပရိသတ္မ်ားအေပါင္းကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္။
Diet လား? လေ့ကျင့်ခန်းလား? ဘယ်ဟာကပိုသာလဲ